XAFIISKA MURASHAXA MADAXWEYNANIMADA EE DAWLAD GOBALEEDKA PUNTLAND
Mudane: Jaamac Cali Jaamac
Talaada, Oktoobar 16, 2001
Is Maandhaafka siyaasadeed ee ergada reer Sool oo muddo socdey ayaa kaabiga u saaran is afgarad iyo guul
Waxaa dhawaantan aad laysugu mari waayey magaalada caasimada ah ee Garoowe, qaabkii loo furi lahaa shirka iyada oo arrimaha hor istaagan ay sabab u tahay bud dhigooda sidan soo socota:
Waa maree ergada oo tiradeeda la kordhiyey
Loolanka Murashax, Faarax Warsame iyo Murashax Goonle oo dhiilo culus, ergada Soolna ku kalifey is maandhaaf
Islaan Maxamed oo gartey in aan shirka aan la furin ilaa beesha Sool is afgartaan oo meel wax isla dhigaan
Gudi kala masalaya labada murashax oo Laas Caano laga filayo, waxaana lagu han weyn yahay in ay berri soo galaan idanka Eebe, deetana loo gar qaado beesha dhexdeeda
Goonle oo jawiga siyaasadeed wax ka badelay, loona arko siyaasi culus, ergada qaarkeedna u arkaan siyaasi dabacsan
Arrimahii ugu cuslaa ee soo mara Murashax, Jaamac Cali Jaamac tan iyo intii uu isu soo sharaxay madaxweynanimada Puntland ee ay ugu cusleyd tii ka dhacdey KULULA, oo ay ku naf waayeen dad degaankaa u dhashay oo xeebaley ah, oo isku qabtey qaabka kaluumeysiga, ayaa maanta lagu soo afjarey magaalada Qardho. Iyada oo Murashaxu uu beelaha is qabtey u ahaa hogaamiye siyaasadeed, ayaa waxaa maanta ka muuqdey farxad aad u weyn wajigiisa. Waxaa uu khudbad khaas ah u qabtey qeybo ka mid ah beelaha Bari, isaga oo ugu bishaareeyey in nabad iyo wanaag laysku af garatey dhibtii ka dhacdey KULULA. Mudane, Jaamac Cali Jaamac waxaa uu mahadnaq balaaran u soo jeediyey dadkii hawshaa camalka wanaagsan u xusul duubtey, kana mira dhaliyey oo beelihii xanafta kala gaartey walaaleeyey. Waxaa Rabi hawshan ku sharifey oo ka jiba keenay Suldaan Maxamed Suldaan Ibraahim iyo Caaqil, Burhaan Boqor Muuse oo wakiil ka ahaa mudanka Boqortooyada Daarood. Goobtaa raxmadeed ee ay beelaha ku heshiinayeen maanta waxaa cuqalada iyo guurtida aan ka soo qeyb galin fadhigaa oo magaalooyin kala duwan joogey, ayey kula socdeen khadka taleefanka, iyaga oo halkaa kuwada duceysanyey, aragtidana isku dhaafsanayey. Murashax Jaamac cali Jaamac ayaa bogaadin sare ku weydaarsadey goobtaa, isaga oo yadadiilo nabaddeed soo bandhigey.
Waxaa maanta arrin laga naxo ay ka dhacdey aqalka Col. C/llaahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo, oo ahaa madaxweynihii hore ee Puntland, halkaas oo ay xabbad isku weydaarsadeen maleeshiyada Col.ka, kuwaas oo dhexdooda is qoonsadey. Waxaa dhaawac ku soo gaarey maleeshiyadii la reerka aheyd madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland, Maxamed Cabdi Xaashi jifadiisa oo halkaa hawlgal maleeshiyo u joogtey. Wax faah faahin ah oo dambe kama hayno dhaawiciina cisbitaalka Gaalkacyo ayuu yaalaa.
Garaad Saleebaan iyo Ugaas C/llaahi Ciise ayaa waxa laga filayaa magaalada Garoowe maalmaha fooda nagu soo haya.
Murashax, Jaamac Cali Jaamac ayaa waxaa la filayaa in uu booqasho gaaban ku aado magaalada Laas Caano ee gobalka Sool, isaga oo helay martiqaad kaga yimid nabaddoonada iyo shacabka Laas Caano. Waxaa mudanuhu uu sheegay in ay tahay fursad dahabi ah oo xiriir gacaltooyanimo ku dheehan tahay.
Heshiis lama filaan ah ayaa waxaa maanta dhexmarey Mudane, Jaamac Cali Jaamac iyo murashixiin dhawr ah oo la loolamayey, kuwaas oo balan qaad siyaasadeed wada gaarey, balse ku dhawaaqey in Jaamac noqdo murashax u tartama jagada madaxweynanimada.
Roobabkii dayrta ee hakadka galay ayaa dib u bilowdey, iyada oo magaalada Buhoodle Roob fara badan ka da�ay maanta, waa Ilaahey mahadii.
Waxaa si lama filaan ah iyana is afgarad hoosaad ku dhawaaqey beelihii Sool ee is hayey maanta galinkii dambe, waxaana la filayaa in baaq uu soo baxo berri subax idanka Eebbe.
Sidaa iyo xiriir wacan, waana idiin bogaadineynaa inta wanaaga jecel ee aan ka caajisin dadaalkooda la talineed iyo wadan jaceyl, sidoo kalana dhammaanteen idinka iyo inagaba Rabi wanaaga ha na waafajiyo.
Xafiiska Murashaxa, Garoowe, Puntland